पहिलो त्रैमाससम्म राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको खुद नाफा ६ करोडभन्दा बढी « Sagarmatha Daily News
काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमाससम्म राष्ट्रिय बीमा कम्पनीले रू. ६ करोड २० लाख ८६ हजार खुद नाफा गरेको छ । बुधवार सार्वजनिक कम्पनीको उक्त अवधिसम्मको अपस्किृत वित्तीय विवरण अनुसार गत वर्षभन्दा यस वर्ष कम्पनीको खुद नाफा १९ दशमलव ८८ प्रतिशत बृद्धि भएको हो । गत वर्ष यस अवधिसम्म कम्पनीले रू. ५ करोड १७ लाख ९२ हजार खुद नाफा गरेको थियो ।
यस वर्ष कम्पनीको आम्दानी करिब १९ प्रतिशत बृद्धि भएको छ । गत वर्ष रू. १२ करोड ३१ लाख ८ हजार आम्दानी गरेको कम्पनीले यस वर्ष रू. १४ करोड ६५ लाख ३७ हजार आम्दानी गरेको छ । हाल कम्पनीको चुक्तापूँजी रू. २६ करोड ६६ लाख ३९ हजार रहेको छ । जगेडा कोष रकम भने गत वर्षभन्दा यस वर्ष ६ दशमलव १९ प्रतिशत बढेर रू. ३ अर्ब १७ करोड ९५ लाख ५५ हजार कायम भएको छ । बीमा कोष रकम गत वर्ष भन्दा ८ दशमलव १४ प्रतिशत बढेर रू. २ अर्ब ४६ करोड १२ लाख २३ हजार पुगेको छ ।
नियमावली खारेज गर्ने प्रदेश सरकारको निर्णय उच्च अदालतद्वारा सदर
विराटनगर । प्रदेश नं. १ सरकारविरुद्ध परेको एउटा रिट आज बुधबार उच्च अदालत विराटनगरले खारेज
मुलुकको अर्थतन्त्र दबाबमा छ : अर्थसचिव मरासिनी
काठमाडौं । मुलुकको अर्थतन्त्र कठिन मोडतर्फ गएको अर्थ मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनीले बताउनुभएको छ ।
भुमी आयोग र उर्लाबारी नगरपालिका बिच धनीपुर्जा वितरणबारे सम्झौता
उर्लाबारी । मोरङको उर्लाबारी नगरपालिका र राष्ट्रिय भुमि आयोगबीच जग्गा धनीपुर्जा वितरण तथा नापी सम्बन्धि
बजेट खर्च हुन नसकेपछि यसअघि खारेज भएका तीन सडक डिभिजन कार्यालय खारेज गर्ने निर्णय फिर्ता
काठमाडौं । सरकारले ६ महिनाअघि तीन सडक डिभिजन कार्यालय खारेज गर्ने निर्णय उल्टाएको छ ।